Actualités – METFP
➡️Tsy mijanona fotsiny amin’ny fampiofanana ireo tanora amin’ny fanaovana tao-trano ny sampan-draharaha ny Firenena Mikambana misahana ny Fampandrosoana na ny PNUD. Mamatsy milina ireo toeram-panodinana
➡️Anisan’ireo ivontoeram-panofanana zandriny indrindra ao amin’ny faritra Androy ny LTP Tsihombe, satria ny taona 2018 no nanokafana izany.Ahitana seha-piofanana roa (02) ity Lysea ity dia
➡️Ankoatra ny toerana fanodinana raketa tao Ambazoa, izay vatsian’ny PNUD vola, ny fokontany Mahazoarivo sy Ankileromotse dia nisitraka milina famokarana menaka vita avy amin’ny kinana.
« Mikatsaka izay fomba hoenti-mampandroso ny ivontoeram-panofanana, indrindra fa ny ety amin’ny faritra ny tenako » , hoy Ramatoa VAVITSARA Rahantanirina Gabriella. Nitondra fampitaovana ho
Tombony lehibe ho an’ny Faritra Androy ny fisian’ny raketa, zava-maniry azo trandrahana tsara ka avadika sakafo, na ho an’ny olombelona na koa ho an’ireo biby
Faritra Anosy : Fanolorana mari-piofanana ireo mpiofana sy fampitaovana ny ivontoeram-panofanana
Vatsiana fitaovana hoenti-mampiofana ireo ivontoeram-panofanana eo anivon’ny fitaleavam-paritry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa. Izany no natao hoy Ramatoa VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, dia ho
Faritra Anosy: fidinana ifotony ety anivon’ny fitaleavam-paritry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa.
Anisan’ny vaindohan-draharahan’ny Ministry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa, Ramatoa VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, ny fidinana ifotony eny amin’ireo ivontoeram-panofanana misandrahaka manerana ny Nosy. Izany
Œuvrer pour l’accès et l’équité des jeunes de différents milieux sociaux, soutenir l’enseignement technique et la formation professionnelle, tel a été l’objet de la cérémonie
Firarian-tsoa ireo mpifaninana amin’ny « Olympiades des métiers »
➡️Sambany i Madagasikara no handray anjara amin’ny « Olympiades des métiers », amin’ny sehatry ny tao-trano. Any Shanghai no hanatanterahana ny fifaninanana manomboka ny 12
« Mivoatra ny hodidina sy ny fahaiza-manao takiana maneran-tany, noho izany ilaina ny famolavolàna fandaharam-panofanana sy ny lasi-panofanana mifanaraka amin’izany » hoy Ramatoa VAVITSARA Rahantanirina